Stainless Steel Jewelry New Design Pink Bow Bow Jewelry ho an'ny Girls - China Jinyun Jewelry
Korea vaovao Stainless vy fomba manan-danja hanidy fo L ...
Stainless vy landy volafotsy fatotra mpivady fehin-tanana
New endrika lamaody Stainless vy miendrika fo jewe ...
Ny fomba farany Stainless vy gitara pendant jewe ...
Ambongadiny fanao Stainless vy manodidina vozony vatosoa ...
Stainless Steel Jewelry New Design Pink Bow Bow Jewelry ho an'ny Girls
lanja / h: 11.5
Alefaso mailaka ho antsika More Latest Products Download as PDF
Iza moa izahay? Jewelry Julong naorina tamin'ny 2006. Ny orinasa no misy any Guangzhou, Shina. Manokana isika ao amin'ny Stainless Steel Jewelry Wholesale amin'ny B2B, ary efa mihoatra ny 10 taona ny raharaha any amin'ny tsipika ity. Hatramin'izao, dia efa niara-niasa tamin'ny mpamatsy 300 mahery nanomboka teo, ary hanana ny fomba fandoavam-bola mety indrindra, tsara indrindra vidin-javatra sy ny tolotra ho an'ny mpanjifa. Misy maherin'ny 100.000 isan-karazany dia afaka mahita teti-dratsy avy amin'ny tranonkala, www.julongsteeljewelry.com . Ny modely vaovao dia havaozina amin'ny alalan'ny isan-kerinandro nandritra ny mihoatra noho ny 2000pcs vokatra vaovao. Notendren'Andriamanitra ho vokatra isan-karazany be dia be, ary afaka manome fahafaham-po tanteraka amin'ny mpanjifa maro samy hafa avy amin'ny firenena samy hafa 'zavatra ilain'ny. Manana mihoatra ny 10.000 no voasoratra anarana mpikambana avy manerana izao tontolo izao, dia mazàna izy ireo mba hanao tsy tapaka indray-tahiry izay mety hitondra azy ireo satria mety maro ny mpanjifa ihany no mila ny 3-15 andro handray ny entany.
Tena ambany dia ambany isika manome zavatra vidiny sy ny fandoavam-bola haingana sy mora izany, toy ny Pay-Pal, Bank famindrana, Western Union sy ny vola gram. Raha toa ianao ka liana, masìna ianao, aza misalasala mba hifandray aminay. Email: julong@julongsteeljewelry.com WhatsApp: +86 18028698162 Veloma finaritra Inona avy ireo tsipiriany ny vokatra? . Ara-nofo: avo kalitao Stainless vy . Endri-javatra: tsy misy nikela, mitarika, harafesina, miaro ny hoditra . Natao ho an'ny tena manokana hanaovana na raha rainy, ny reniny, ny namana, mpivady, mpivady Noely, Halloween, andro nahaterahan'i, tsingerintaona fanomezam-pahasoavana. . 1 00% fitiliana, azo antoka 100% tsara! . Ampiasao Nikosokosoka fitaratra, ka dia gloss ambonin'ny mihasimba bebe kokoa. . Taorian'ny Fitotoana Vary tsara maro, tsininy. Fisaka tsy misy protrusion. Nahoana ianao no nifidy ny orinasa? Main vokatra - pendant vakana, haba sy haba sy peratra fanombohan-kavina, rojo, fototra vava vola, sns
Various Stainless vy Accessories. Business modely - isika matihanina sy za-draharaha hatramin'ny taona 2006. mpanamboatra firavaka Quality fanaraha-maso - Misy efa-dahy dingana fanaraha-maso hentitra tsara, ary matoky afa-tsy ny andraikitra. R & D - dia manana ekipa matihanina ny mpiara-miombon'antoka izay mora mahatsapa ny lamaody Accessories. Refund kilema politika - - dia hentitra hijery tsoa rehetra 3 dingana alohan'ny fanondranana. Raha tsy misy tsara noho ny olana delivery, azafady mampahafantatra antsika amin'ny andro (ao anatin'ny 15 andro aorian'ny ianao mandray ny fonosana). Dia refund anao na manolo anareo ao amin'ny manaraka mba.
Misaotra ny fanadihadiana. Stainless vy izahay sy ny mpanamboatra firavaka wholesaler, ka ny TNR dia USD 300, 3 pcs isaky ny famolavolana isaky ny habeny. Fa raha tena mila santionany mba hizaha toetra, dia afaka hanafatra USD 100, fara fahakeliny, ny fandefasana vola dia momba ny USD 30 ny 1 kg. Maniry tsara kokoa isika dia afaka manorina raharaham-barotra sy ny fisakaizana. Veloma finaritra Bella
Mifandraisa aminay foana izahay manana olona eo amin'ny tanana mba hamaly ny fanontaniana. Mino isika fa amin'ny fotoana nilany azy ny mpanjifa, ka dia hanao izay rehetra azo atao mba hanomezana fahafaham-po ny mpanjifa. Raha toa ka misy olana, fanehoan-kevitra, na ny soso-kevitra, dia mifandraisa aminay. email: julong@julongsteeljewelry.com mpikambana Level: (accoring ny mba vola, dia hanana sehatra hafa disccount) Level1 5% Level2 8% Level3 10% Level4 12% Level5 15% Level6 18% Level7 20%
Ary izahay efa nahazo baiko bebe kokoa isan'andro, dia nanitsy ny dingana miasa mba manome asa fanompoana tsara kokoa ho an'ny mpanjifa, ary ho azo antoka ny mpanjifa afaka mandray baiko ara-potoana. Toy izao manaraka izao ny dingana asa vaovao: (Araka ny Bejing Time) 1. isa-maraina, noho ny baiko vaovao izay mandray karama efa talohan'ny mitataovovonana 12:00 isika, dia mandamina izany ary hijery ny tahiry amin'ny andro iny ihany. Raha manao ny fandoavana rehefa afaka 12:00 mitataovovonana, dia handamina izany ka jereo ny petrabola ao amin 'ny ampitso. 2. Rehefa avy nandray ny mpamatsy lisitra, raha afaka manao fandoavam-bola ny farany eo anatrehan'i 6:00 hariva, dia afaka an-tsambo ny mba miaraka amin'izay koa hariva. Raha manao ny fandoavana aorian'ny 6:00 ora hariva, dia an-tsambo ny filaminana amin'ny andro manaraka. 3.For ny baiko izay efa mandray karama, raha Hianao no nanao manampy mba ho vita ny fifandanjana eo anatrehan'i 12:00 mitataovovonana, dia handefa anareo ny farany lisitry fonosana miaraka amin'izay koa hariva, ary an-tsambo ny filaminana amin'ny andro manaraka. Raha Hianao no nanao ny nanampy mba ho vita ny mahay mandanjalanja rehefa afaka 12:00 mitataovovonana, dia handahatra ny nanampy filaminana sy handefa lisitra fonosana farany amin'ny andro manaraka anao sy ny lamina ho an-tsambo avy rehefa avy rahampitso. Alohan'ny hanaovana ny filaminana, azafady katsaram-panahy handamina ny fotoana araka ny toe-javatra manokana. Miala tsiny ho an'ireo izay tsy hanahirana nahatonga anao. Raha toa ka manana fanontaniana, Aza misalasala mifandray aminay. Misaotra. Veloma finaritra.
Kaonty Paypal: julong@julongsteeljewelry.com Western Union Mba andefaso olona miaraka aminay eo anatrehanao manao ny fandoavam-bola amin'ny alalan'ny Western Union, mba hanamarinana ny mpandray ny anaran'Andriamanitra. Transfer Bank Information Company kaonty
Tombontsoa Bank Name HSBC
Anaran'ny orinasa Jinyun Trade Limited
Bank Account tsy 801406885838
tombontsoa Bank 1 Queen ny Road Central, Hong Kong
Kaody Swift HSBCHKHHHKH
Fandefasana Policy Tsy misy adiresy an-tsambo ho eto amin'izao tontolo izao. Nandidy ny entana amin'ny alalantsika no alefa amin'ny EMS na ny TNT na ny DHL, na FEDEX na UPS. Dia mampahafantatra anao amin'ny fanaraha-maso No. amin'ny alalan'ny e-mail raha vao ny filaminanareo dia nalefa avy rehefa mahazo izany avy amin'ny orinasa mazava. Ny adiresy an-dalambe no takina ho an'ny lahateny. Varony dia ho voavonjy Malagasy Air-mazava isan-trano, izay eo ho eo 3-5 maka andro fiasana. Fanaterana ny fotoana tsy ahitana ny fikarakarana ny fotoana. Ny vokatra dia alefa avy isan'andro, avy amin'ny Alatsinainy ho Sabotsy, afa-tsy andro fialan-tsasatra. Baiko ny ankamaroan'ny napetraka amin'ny andavanandro dia ho alefa ao amin'ny 2 na 3 andro izany, raha napetraka ny faran'ny herinandro baiko dia nalefa ny Alatsinainy manaraka izao. Hahazo ny e-mail ny fandraisana ho mpikambana amin'ny ampy isa. Efatra amby roapolo ora mandimby anao hahazo ny ampy isa, dia ho afaka manara-maso ny filaminana amin'ny internet ao amin'ny http://www.ems.com.cn/english-map.jsp http://www.tnt.com http: / /www.dhl.com/en.html http://www.ups.com/en.html http://www.fedex.com Fotoana fanaterana Samy hafa arakaraka ny firenena ny toerana.
Shipping Fomba ny Delivery julong firavaka Manamafy orina ny fiaraha-miasa mafy amin'ny fandefasana entana efatra lehibe rehetra ireo orinasa: DHL, UPS, FEDEX sy TNT mba hanome matihanina maneran-tany isan-trano fanaterana. Ora nanomezana Items dia ho alefa ao amin'ny raharaham-barotra andro manaraka rehefa efa avy amin'ny teny anglisy avy. Amin'ny ankapobeny, dia mety ho tokony ho 3-5 raharaham-barotra andro ho an'ny delivery, arakaraka ny lahateny samihafa midika fa mifidy. Isika tsy tompon'andraikitra amin'ny ratsy na undeliverable adiresy. Mba ho azo antoka ny sambo adiresy marina sy deliverable. Order Tracking Tsy mamela anao manara-maso ny filaminana amin'ny tsindry ny totozy. Raha ny fandefasana hamafisina, dia hahazo ny fanaraha-maso fandraisana ho mpikambana maro ao amin'ny e-mail. Mandra-pahoviana no tsy haka noho ny zavatra mba hahatratra ahy? Mariho tsara fa ny raharaham-barotra andro, manavaka Sabotsy, Alahady sy Public Fety, dia kajy eo amin'ny fe-potoana fanaterana. Amin'ny ankapobeny, dia mitaky ny 3-5 andro ny fanaterana raharaham-barotra. Ahoana no manara-maso ny entana? Ny fividianana an-tsambo izahay alohan'ny faran'ny andro manaraka rehefa raharaha efa anglisy-out. Izahay mandefa e-mail amin'ny ampy isa mba azonao atao ny manamarin ny fandrosoana ny lahateny am-mitondra 'tranonkala. Inona no tokony hataoko raha tsy tonga ny sambo? Masìna ianao, hamela ny raharaham-barotra ny 10 andro noho ny zavatra mba ho voavonjy. Raha mbola tsy tonga, azafady hanohina antsika amin'ny fipihana ny "Contact Us" bokotra eo amin'ny tranonkala. Dia miverina aminao haingana.
Previous: Best fo fivarotana miendrika voninkazo famolavolana Stainless vy firavaka lamaody ho an'ny vehivavy
Next: 18K Gold nopetahany takela Stainless Steel Tassel Jewelry Set
vakana Jewelry Sets
Brcelets ho an'ny vehivavy
Fashion Jewelry ambongadiny
Volamena nopetahany takela Jewelry
Volamena nopetahany takela Stainless Steel Jewelry
i Jesosy Pendent
Jewelry Ny fanaovana Suppliers
Jewelry Ny fanaovantsika Supplies
Stainless Steel sofina Studs
ambongadiny Jewelry Shina
Ambongadiny Stainless Steel Jewelry
ambongadiny Stainless Steel Jewelry Supplies
Round rojo Hypoallergenic Senior Fanantenana Fiainana ...
Fashion firavaka volamena Stainless vy Infinity n ...
Matt surface Stainless vy firavaka napetraka
New endrika sariitatra Stainless vy hatsarany neckla ...
New endrika sariitatra rojo vy Stainless sofina ...